के तपाईंलाई सम्झना छ?​​—डिसेम्बर २०१३ | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली एफिक एस्टोनियन ओरोमो कम्बोडियन काजाक किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिलिगेनोन
येशूले कहिले “कैदमा परेका दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई प्रचार गर्नुभयो”? (१ पत्रु. ३:१९)
दुष्ट स्वर्गदूतहरूले पाउने सजायबारे येशूले आफू पुनर्जीवित भएको केही समयपछि तिनीहरूलाई घोषणा गर्नुभयो जस्तो देखिन्छ।—६/१५, पृष्ठ २३.
येशूले मानिसहरूलाई भेडा वा बाख्राको रूपमा कहिले इन्साफ गर्नुहुनेछ? (मत्ती २५:३२)
झूटो धर्मको विनाशपछि महासङ्कष्टको दौडान येशूले सबै जातिका मानिसहरूलाई भेडा वा बाख्राको रूपमा इन्साफ गर्नुहुनेछ।—७/१५, पृष्ठ ६.
गहुँ र सामाको दृष्टान्तमा उल्लिखित कुकर्मीहरू कहिले रुनेछन्‌ र रिसाउँदै चीत्कार गर्नेछन्‌? (मत्ती १३:३६, ४१, ४२)
विनाशबाट कुनै हालतमा उम्कन सकिंदैन भनेर बुझेपछि तिनीहरू महासङ्कष्टको बेला हताश भएर रुनेछन्‌र रिसाउँदै चीत्कार गर्नेछन्‌।—७/१५, पृष्ठ १३.
विश्वासी र बुद्धिमान्‌ दासबारे येशूले भन्नुभएको कुराको पूर्ति कहिले भयो? (मत्ती २४:४५-४७)
यसको पूर्ति इस्वी संवत्‌ ३३ पेन्तिकोसदेखि होइन तर सन्‌ १९१४ देखि हुन थाल्यो। सन्‌ १९१९ मा येशूले दासलाई घरका अरू दासहरूमाथि नियुक्त गर्नुभयो। यसमा आध्यात्मिक भोजन खानेजति सबै पर्छन्‌।—७/१५, पृष्ठ २१-२३.
येशूले विश्वासी दासलाई आफ्ना सबै सम्पत्तिमाथि कहिले नियुक्त गर्नुहुन्छ?
महासङ्कष्टको दौडान विश्वासी दास स्वर्गमा येशूको सह-शासक भएपछि तिनीहरूलाई मालिकका सबै सम्पत्तिमाथि उहाँले नियुक्त गर्नुहुनेछ।—७/१५, पृष्ठ २५.
साक्सेनहाउसेन यातना शिविरबाट मृत्यु-यात्रामा हिंड्न बाध्य पारिएका २३० साक्षीहरूको ज्यान गएन। यतिबेला परमेश्वरको पवित्र शक्तिका साथै अरू कुन कुराले तिनीहरूलाई मदत गऱ्यो?
रोग लागेकोले र भोको भएकोले सबै कमजोर भए तापनि हार नमान्न तिनीहरूले एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिइरहे।—८/१५, पृष्ठ १८.
इस्राएलीहरू प्रतिज्ञा गरिएको देशमा जान यर्दन नदी तरेको विवरण हाम्रो लागि किन प्रोत्साहनदायी छ?
नदी तीव्र गतिमा बगिरहेको थियो तर यहोवाले इस्राएलीहरूले नदी पार गर्न सकून्‌ भनेर पानीको बहाब रोकिदिनुभयो। यसले गर्दा यहोवाप्रतिको तिनीहरूको विश्वास बलियो भएको हुनुपर्छ। यो विवरण हाम्रो लागि पनि प्रोत्साहनदायी छ।—९/१५, पृष्ठ १६.
मीका ५:५ मा बताइएको मुखिया र गोठालाहरूको भविष्यवाणी आज कसरी पूरा भइरहेको छ?
मीका ५:५ मा बताइएको “सात गोठाला र आठ मुखिया”-ले मण्डलीका एल्डरहरूलाई चित्रण गर्छ भनेर हामीले बुझेका छौं। एल्डरहरूले परमेश्वरका जनहरूलाई भविष्यमा हुने आक्रमणको प्रतिरोध गर्न तयार पार्दै छन्‌।—११/१५, पृष्ठ २०.
के तपाईंलाई सम्झना छ?—डिसेम्बर २०१३